Abahlinzeki be-WPC PVC FOAM LINE kanye neFektri - China WPC PVC FOAM LINE Manufacturers
I-PVC Ukuqapha Ukubonisa I-Foam Core Free Foam Board Line
Ishidi lokubonisa le-PVC lithole izici zokulwa nokugqwala, ukufakazela umswakama, ukufakazela isikhutha, okungekho okokufaka umoya, ukubhoboza, ukubonakala, ukuhleleka, okulula ukwenza i-thermoform, ukucubungula okushisayo okushisayo, njll., Ngakho-ke lisetshenziswa kakhulu kufenisha, kumakhabethe, kubhavu amakhabethe, amabhodi eshalofu lombukiso, izingqimba zamabhokisi angaphakathi, umhlobiso wangaphakathi nangaphandle, izinto zokwakha, imboni yamakhemikhali neminye imikhakha, izimpawu zokukhangisa, ukuphrinta, isikrini sikasilika, i-inkjet, ukubhala i-computer, ukufakwa komkhiqizo wensimbi ngogesi nezinye izimboni.
Imininingwane yomkhiqizo 1220 * 2440mm, 1560 * 3050mm, 2050 * 3050mm
Ubukhulu bomkhiqizo 1-33mm
Ubuningi bomkhiqizo 0.35-0.8g / cm3
Isivinini somugqa wokukhiqiza: 2-4m / min.
Amandla kagesi 75kw -90kw
Lo mugqa ungakha iBhodi le-PVC ngobubanzi obusuka ku-900 -1220mm, ubukhulu: 12-25mm
Okusetshenziswa kabanzi njengebhodi lokuvala embonini yezokwakha.
Izici nezinzuzo zethempulethi yokwakha i-PVC: 1. Izinto ezibonakalayo zethempulethi yokwakha i-PVC yi-PVC SG5, ibhodi iyi-B1 retardant flame, iyazicisha uma kwenzeka umlilo, ukumelana nokushisa okuphezulu, nokuphepha kokwakhiwa kuyathuthukiswa. Uhlobo olusha lwethempulethi olungena esikhundleni sethempulethi yensimbi nokhuni lwamapulangwe ngoqalo, lunezici zobufakazi bomswakama, ukufakazela isikhutha, ukumelana nokugqwala, nokungamunci. 2.Usimende onganamatheli, okulula ukuwudiliza ngemuva kokwakhiwa, akukho ukusonteka. 3. Ukusebenza kahle kokwakha kuphakeme, ikhwalithi yinhle, ingaphezulu lesakhiwo esakhiwe ngalo libushelelezi futhi liyisicaba, umphumela wokubumba othululwayo muhle, futhi akukho ukuguqulwa kwesibili okudingekayo. 4. Izikhathi zokusebenzisa inzuzo zingafinyelela ngaphezu kwezikhathi ezingama-50, impilo yokusebenza ende, ukusebenza kahle kokwakhiwa, ukugcinwa okulula, ezokuthutha kanye nokwakhiwa. 5. Isifanekiso semfucumfucu singachotshozwa siphinde sisetshenziswe kabusha ekukhiqizweni nasekusebenziseni kanye nezinye izinzuzo, kulondolozwa izinsizakusebenza futhi kuhlangatshezwane nezidingo ze "green industry". 6. Isifanekiso sokwakha i-pVC sinezici zokufakwa kwemisindo, ukumunca umsindo, ukufudumeza ukushisa, ukulondolozwa kokushisa, njll., Futhi kunemiphumela emihle yokushaqeka. 7. Indlela yokwengeza izinkuni ingasetshenziselwa ukwelashwa okuhlukahlukene, okungacutshungulwa njengokhuni njengokubhola, ukusika, ukubethela, ukugwedla, ukunamathela, njll. Kungaboshwa nezinye izinto ze-PVC ngokwezinqubo ezijwayelekile, ngakho-ke nezimo kusayithi lokwakha Ukwenza ukucubungula kwesibili.
Ibhodi le-foam le-PVC / WPC manje seliba uhlobo olulodwa lwezinto ezinhle kakhulu ezisetshenziswa kakhulu kusicelo sebhodi lefenisha. Ngokusebenza okuhle nokusizakala, kuyathandeka, kuyimfashini, okuhlala isikhathi eside futhi isixazululo esihle sokuhlobisa ikhaya. Ulayini wokukhiqiza wakhiwa i-twin-screw extruder ekhethekile, i-extrusion die, ama-roller amathathu aqondile nomshini osizayo. Inkampani yethu inikeza ifomula nesethi ephelele yobuchwepheshe. Umugqa wonke wokukhiqiza unezici zokukhipha okukhulu, i-extrusio ezinzile ...
Wood-plastic board is a kind of wood (wood cellulose, plant cellulose) as the material basic, thermoplastic polymer materials (plastics) and processing aids, njll, kuxutshwe ngendlela efanayo, bese kufudunyezwa futhi kukhishwa yimishini yesikhunta. Izinto zokuhlobisa ezintsha zobuchwepheshe obuphakeme, obuluhlaza kanye nezemvelo, nazo zombili ukusebenza nezici zokhuni noplastiki, yizinto ezintsha ezihlanganisiwe ezingathatha indawo yokhuni noplastiki. 1. Amanzi: i-mothpr ...